Iphupha malunga noMlilo weTraki ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Isitshizi somlilo okanye isigadla somlilo saziwa njengesixhobo sokuchela ngoxinzelelo. Yimpompo yokulwa umlilo eqhutywa ngoncedo lwe amandla umsipha kwaye usetyenziselwa ukulwa umlilo. Ngokubanzi, isigadla-mlilo sihlala siphazama ngempazamo njengesixhobo sokutshiza sokuhambisa amanzi.
Iilori zokuqala zomlilo zakhiwa kwangoko ngenkulungwane ye-XNUMX. Ukusetyenziswa kwezi syringes kwakenzelwe ukuthintela umlilo ukuba unganwenwi okanye usasazeke kwezinye izinto ekunzima ukufikelela kuzo ngeebhakethi zamanzi. Nangona kunjalo, iinzame ezithe ngqo zokucima umlilo bezingakhange zenziwe ngenxa yokuba ukusebenza kwezi syringe zokucima umlilo kwakusezantsi.
1 Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwephupha lubeka umfanekiso wephupha "isirinji yomcimi-mlilo" njengophawu lwe ngaliswa ayizukuba ntle into kulowo uphuphayo. Ngale nto okanye iziphumo zolu loyiko, umntu ochaphazelekayo kuya kufuneka aphile evukile. Kuba ngekhe ukwazi ukuyinqanda.
Nabani na ozijoba ngeloli yomlilo ephupheni lakhe akazukuvuzwa ngesenzo esihle. Ngokuchasene noko, umntu ophuphayo uba yintlebendwane okanye ungcolisa igama lakhe. Ukunyelisa isivuno. Ukuba isebe lomlilo liyakukhathaza ngesirinji xa ulele, into ekuyo el mundo ukuvuka akuyi kuba ngcono, kuya kuba kubi. Kodwa ukuba ugcina amehlo akho evulekile kwikamva elikufutshane, unokukuphepha okubi kakhulu.
Umbono wetraki yomlilo emotweni njengomfanekiso wephupha ubonakalisa ukuba iphupha liza kuqhubeka ebomini bakho ngaphandle kweziganeko ezingathandekiyo. Ukuba umntu oleleyo uqhuba okanye uhambisa eso sithuthi ephupheni lakhe, kufuneka aqwalasele eyakhe Bekwa yazi ukunceda.
Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, uphawu lwephupha "isirinji yomcimi-mlilo" linokubhekisa kwinto yomzimba okanye yengqondo. kugula zibonisa ngokuchasene noko umphuphi aqhubeka nokuvuka ebomini. Ngokukodwa ukuba yena ephupheni ucima into ngamanzi kwilori yomlilo, uya kuphumelela kule nzame.
Ukuba isirinji yomlilo ibonwa ngokunxulumene nethumbu kwiphupha, umntu ekuthethwa ngaye kufuneka aloyise iphupha lakhe. iimfuno zesondo boniswa. Kuya kufuneka ujongane nazo ngakumbi kwilizwe labalindi. Ukuba amanzi aphuma ngaphandle kwesirinji ngokungalawulekiyo kule meko yamaphupha, oku kunokuqondwa njengophawu lokungabikho kolawulo lweemvakalelo zikabani.
Ukuba umphuphi usebenzisa ilori yomlilo ngelixa elele ukucima indlu etshayo okanye omnye umthombo womlilo, angayenza kakuhle eyakhe Ukuthanda kwaye uthintele iminqweno ebomini bokuvuka. Uyamkele kwaye ke unolawulo oluchanekileyo kuyo.
Uphawu lwephupha «isirinji yomlilo» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, isimboli selori yomlilo inokusetyenziswa njenge impembelelo ngokweemvakalelo Makuqwalaselwe.